Hay’adda IMF oo markii u horeysey soo bandhigtey koritaanka dhaqaalaha Somalia iyo Somaliland |
Hay’adda IMF oo markii u horeysey soo bandhigtey koritaanka dhaqaalaha Somalia iyo Somaliland
Nairobi (GNN)-Hay’adda lacagta Adduunka ee IMF ayaa markii u hoeysey muddo 25 sano ah soo bandhigtey wabixin ku saabsan koritaanka dhaqaalaha ee Somalia iyo Somaliland, halka uu markii hore ka ahaan jirey “NA” Not Available.
Hay’adda IMF ayaa shgeetey in sanadkii 2014 dhaqaalaha Somalia iyo Somalia kor u kacay 3.7%.
Dhaq-dhaqaaqa ganacsiga ayaa lagu qiyaasayaa in uu garayo 3.7% sanadkii 2014, waxaana ka qayb-qaatey waxsoosaarka beeraha, xoolha nool, dhismayaasha iyo Isgaarsinta” sidaas waxaa lagu yiri bayaan ka soo baxay IMF. Hay’adda lacagta Adduunka ayaa qiyaaseysa sanadkan 2015 in dhaqaalaha Somalia Iyo Somaliland kor u kacayo 2.7%.
Kooxda IMF u samaysey baaritaanka ayaan soo booqan dalka ay qiimeynayeen dhaqaalihiisa ee Somalia iyo somaliland, waxaana a shaqadooda ku qabsadeen magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Warbixinta ay soo saareen ayaa lagu yiri
– Somaliya iyo Somaliland waxay u baahan tahay aragtiyo is waafaqsan marka la eego Federaalka Maaliyadda, oo ay ku jirto damaanad qaadka helitaanka adeegyada, dakhli ururinta iyo wadaagiisa.
IMF ayaa warbixinteeda ku shegtey in Dowldda Somalia iyo Somaliland si xoogleh ugu tiirsan tahay gar-gaarka caalamka, waxaana ay ku baaqdey in la adkeeyo Hay’adahaMaaliyadda iyo hagajinta kor u qaadida dakhliga.
Kooxda baaritaanka samayseyayaa shirar la qaatey Wasiirka Maliyadda ee Soomaaliya Maxamed Aadan Ibraahim, ku-xigeenka Wasiirka Qorsheynta Cabdullaahi Shiikh Cali iyo Guddoomiyaha Bangiga Dhexe Bashiir Ciise Cali.
Qiimeynta ay sameyso hay’adda IMF waxaa si weyn u tixgeliyo maal-gashadayaasha iyo shirakadaha waaweyn ee caalamka.
Hay’adda FAO ayaa sanadkan soo saarteywarbixinay ku sheegeyso kor u kaca dhoofka xoolaha Soomaaliya iyo Somaliland ee sanadkii 2014, waxaana Dekadaha Bosaso iyo Berbera ka dhoofey xoolo ka badan 5 milyan oo neef, taas oo kor u qaadey GDP Soomaaliya.